70 kun oo qof ayaa la filayaa inay la safraan Y YHT inta lagu jiro fasaxa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara70 kun qof ayaa la filayaa inay la safraan YHT
03 / 10 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
70 kun oo qof ayaa la rajaynayaa inay la raacaan YHT inta lagu guda jiro Ciidda: Sababta Ciidul Adxaa awgeed, waxaa jira gaadiid aad u tiro badan oo isku kala goosha. 5, oo daboolaya xilliyada ka hor iyo ka dib fasaxa, ayaa sameeyay safarro dheeri ah si loo yareeyo safarrada maalinlaha ah. Shirkadaha diyaaradaha waxay abaabulaan safarada dheeriga ah ee 400, basaska iyo tareenada in kasta oo ay socdaan duulimaadyada dheeraadka ah, ayaa sheegay in aysan jirin meel.
Intii lagu jiray shanta maalmood ee Ciidul Adxaa, gaadiidku waa mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee loogu talagalay muwaadiniinta. Tigidhada Xawaaraha Sare (YHT), inta ay hawada ka maqan yihiin, gawaarida gaadiidka dhulka iyo bada ayaa ka tagay meel aad u yar. Shirkaduhu waxay abaabulayaan dhowr safar oo dheeri ah si ay uga horjoogsadaan kuwa fasaxa u taga inay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira safarkooda inta lagu jiro Ciidul Adxaa.
Diyaaraddaha THY iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, 3-8 October Ciidul Adxaa, rakaabku dhib kuma lahan doonto helitaanka meel duulimaadyada, sidoo kale duullimaadyada jira, duullimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxay sameyn doonaan duulimaadyo dheeri ah oo ku dhow 400. Duullimaadyada ugu badan ee dheeri ah inta lagu jiro xilliga fasaxa, Istanbul Sabiha Gokcen oo fadhigeedu yahay Pegasus ayaa abaabuli doonta duullimaadyada. Shirkadda, oo u qorsheysay duullimaadyo wadarta guud ee meelaha ay tagayaan 36 ee dalka 86, ayaa abaabuli doona duullimaadyada gudaha ee 1-12, 196 ee Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus iyo 69 duullimaadyada caalamiga ah inta lagu gudajiro Ciidul Adxaa sababtoo ah baahida sii kordheysa ee khadadka gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Inta lagu jiro xilliga fasaxa, Atlasjet wuxuu sameyn doonaa duulimaadyo dheeri ah oo Antalya iyo Bodrum ku yaal Turkiga iyo 28 oo taga dalal badan oo caalami ah, gaar ahaan Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus iyo Kuweyt. Onur Air waxay diyaarin doontaa duulimaadyo dheeri ah safarada Izmir, Bodrum, Dalaman iyo Antalya inta lagu jiro xilliga fasaxa waxayna adeegyo ku bixin doonaan diyaaradaha waaweyn ee duulimaadyadooda. Shirkadda waxay qaadi doontaa 03 kun oo qof inta lagu jiro fasaxa inta u dhexeysa Oktoobar 07-55.
Maalmo ka hor Ciidul Adxaa, waxaa jira bas isku xirka iyo adeegga tareenka oo aad u ba'an. Gaar ahaan muwaadiniinta doonaya inay fasaxa ku qaataan magaaladooda, waxay u duuleen xarunta basaska iyo wakiilada iibka ayaa buuxiyay duulimaadyadii maalintii ugu dambeeyay ee 4. Tuğçe Altun, sarkaalka dalxiiska ee Nilüfer, wuxuu tilmaamay inay diyaariyeen duulimaadyo hal daqiiqad gudaheed ah wuxuuna yiri, "Celcelis ahaan gobolka 5 wuxuu lahaan doonaa in kabadan seddex boqol duulimaad maalin walba. Intii lagu guda jiray Iiddii Ramadaanka, xoojinta aagagga xeebaha ayaa aad u sarreeyay iyo cufnaanta gobolladayaga gudaha ah ayaa dhacay intii lagu jiray ciidaan. ” YHT'de 2-3 Oktoobar iyo 7-8 October gaar ahaan tigidhada ayaa la iibiyaa. Yeytyadu waxay qaadi doonaan qiyaastii 12 kun oo rakaab ah maalintii, oo ay kujiraan 10 inta udhaxeysa Ankara-Istanbul, 14 inta udhaxeysa Eskişehir-Ankara, 4 inta udhaxeysa Ankara-Konya iyo 40 duulimaadyada inta u dhaxeysa Eskişehir-Konya. 17, oo daboolaya xilliyada ka hor iyo ka dib xafladda, ayaa la filayaa inay ku safraan ku dhawaad ​​1000 qof oo leh cudurka 'HAT' inta lagu jiro maalinta.
6 waxaa loo qorsheeyay sida kunka qof.
9 ayaa la dalacsiiyay ka dib shilka YHT
Istanbul KadıköySafka ugu dambeeya ee taraam